I-Sprinklr: Ukukhuselwa kokuHlaliswa koLuntu kwiShishini | Martech Zone
Imibutho yamashishini inemiceli mngeni emininzi efuna ukuba iimveliso zayo ziphuhliswe ngokwahlukileyo. Izicelo zamashishini zineendima eziphezulu, iimvume, ukunika ingxelo kunye nokuhamba komsebenzi, banokufuna iindlela zophicotho zeshishini lezempilo kunye nezemali, kwaye kufuneka balinganise ngokufanelekileyo. Ngaphakathi kwimidiya yoluntu, lo ngumceli mngeni ogqithileyo ngenxa yemiceli mngeni yedatha enkulu kunye namaqonga amaninzi afikelelekileyo.
I-Altimeter ibekwe kwinqanaba I-Sprinklr as kakhulu onako ukuhlangabezana neemfuno zamashishini amakhulu. Uqoqosho lubekwe kwi-Sprinklr kwelona qonga liphezulu labanakho ukuqhuba iminyaka emi-2 ngokulandelelana. Ngaphezulu Iimpawu ezingama-200 zamagama asekhaya njengabaxumi kunye nokuthunyelwa ukuya kuthi ga kubasebenzisi abangama-5000 kwii-10 zamazwe… ngokuqinisekileyo bakhokela ipakethi.
I-Sprinklr ibonelela ngeqonga lokwenyani le-SaaS elinikezela:
Ulawulo loLuntu kubandakanya ubunini beakhawunti kunye nokuvunywa kuwo onke amashishini angaphakathi kunye neeyunithi zejografi.
Ukuzibandakanya entlalweni kwii-akhawunti ezininzi kunye namajelo (Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube, Flickr, Foursquare, Slideshare, Blogs njlnjl.
Ulawulo lwabaphulaphuli ekuhlaleni kubandakanya impembelelo kunye nokuzibandakanya ukufaka amanqaku kuHlalutyo lwezeNtlalontle ukubonelela ngomjelo wenqanaba legranular kunye nengxelo yomkhankaso kunye nokuqonda.
Umdibaniso wentlalo Ukwenza unxibelelwano kunye neenkqubo ezikhoyo zentengiselwano kunye neenkqubo zokunika ingxelo.
Ngelixa kukho ezinye iimveliso ezikhuphisana kwindawo yeshishini, kukho umahluko ophambili ovela kwi-Sprinklr. Okokuqala, kuphela ejolise kumashishini. Ngaphezulu kwe-80% yabathengi babo ngaphezulu kwe- $ 1bn kwingeniso. Inkqubo yabo yoLawulo lweMidiya yezeNtlalontle ibonelela ngezixhobo eziza kwenza ishishini kwezentlalo kumajelo, amaqela, imisebenzi, izahlulo kunye nejografi. Kwaye zenzelwe isikali-izinto ezinje ngokuSebenza koLwimi lweNdalo, imigaqo ezenzekelayo ebandakanya izinto ezibangela, iintshukumo, kunye neefilitha, ulawulo lwentlalo oluhlangeneyo. Xa ujongene nenani elikhulu leeakhawunti, iincoko, okanye abasebenzisi, KUFUNEKA ube nazo ezi okanye kungenjalo uya kufa.
I-Sprinklr kutshanje upapashe le Whitepaper, Ezona zenzo zibalaseleyo zoKhuseleko kumaShishini oSasazo eendaba:
tags: ishishini kwimidiya yoluntuamashishini eendaba asebenzayo asebenzayoamajelo amaninzi osasazo lwasekuhlaleniimithombo yeendaba eyahlukeneyoUkulungiswa kolwimi lwendalouhlalutyo kwimidiya yoluntuideshibhodi yemidiya yoluntuulawulo lweendaba ezentlalo